Nhau - Ndeapi Iwo Masere Masere Ejekiseni Mould?
Ndeapi Iwo Ese Mapato Ejekiseni Mould?
(1) Imwe-chikamu mutsetse jekiseni anoumba
Kana chakuvhe chikavhurwa, iyo inotakurika furuu uye yakagadziriswa muforoma inoparadzaniswa, kuitira kuti chikamu chepurasitiki chiburitswe kunze, icho chinodaidzwa kuti imwechete yekuparadzanisa pamusoro pevhu uye zvakare inonzi mbiri-ndiro ndiro. Iyo ndiyo yakapusa uye inonyanya kukosha fomu yejekiseni muforoma. Inogona kugadzirwa seimwe chete mhango jekiseni muforoma kana yakawanda-mhango jekiseni muforoma sekudikanwa. Iyo ndiyo inonyanya kushandiswa jekiseni muforoma.
(2) Double yokuonekana pamusoro jekiseni muforoma
Iyo mbiri yekuparadzanisa pamusoro jekiseni muforoma ine nzvimbo mbiri dzekuparadzanisa. Inofananidzwa neiyo imwechete yekuparadzanisa pamusoro jekiseni muforoma, iyo mbiri yekuparadzanisa pamusoro jekiseni muforoma inowedzera chikamu chinofambiswa chepakati ndiro (inonziwo chinofamba chinofamba gedhi ndiro) mune yakatarwa muforoma chikamu. Iyo yakagadzirirwa nemasuwo, mamhanyi uye zvimwe zvikamu uye zvikamu zvinoda kuti zvive zvakagadziriswa), saka inonziwo matatu-ndiro mhando (inofamba ndiro, yepakati ndiro, yakagadziriswa ndiro) jekiseni muforoma, iyo inowanzo shandiswa kune imwechete-mhando gedhi. kudyisa. Mhango kana yakawanda-mhango jekiseni anoumba. Kana chakuvhe chikavhurwa, iyo yepakati ndiro inopatsanurwa kubva kune yakatarwa template padanho rakatarwa pane yekumisikidza positi yeiyo yakagadziriswa mold kuti ibvise condensate yeiyo inodurura system pakati pematemplate maviri. Kaviri kupatsanura pamusoro jekiseni muforoma ine yakaoma chimiro, yakakwira kugadzira mutengo, uye zvakaoma zvikamu kugadzirisa. Kazhinji haishandisirwe kuumbwa kwemakuru epurasitiki zvigadzirwa.
(3) jekiseni Kuumbwa pamwe lateral parting mutsetse uye makirisito kudhonza mashandiro
Kana chikamu chepurasitiki chiine maburi edivi kana mabhureki, zvinofanirwa kushandisa musimboti kana mutserendende unogona kufamba nedivi. Mushure mejekiseni jekiseni, iyo inotakurika muforoma inotanga kuendeswa pasi yakati chinhambwe, uyezve iyo yakatsvedza chikamu chepineti yakakoshwa yakamisikidzwa pane yakatarwa template inomanikidza iyo inotsvedza kuti ibude kunze, uye panguva imwechete, iyo pusher yeinodzikisira mashandiro inosundira iyo pusher ndiro yekuumba iyo epurasitiki chikamu. Bvisa musimboti.
(4) jekiseni Kuumbwa pamwe chinjwa kuumbwa zvikamu
Nekuda kwezvimwe zvakasarudzika zvemapurasitiki zvikamu, jekiseni kuumbwa kunofanirwa kupihwa zvinofambiswa zvikamu zvekuumba, senge zvinofambiswa convex mafuru, anotakurika concave mafuru, anotakurika anoisa, anotakurika akamisikidzwa cores kana mhete, nezvimwe. Buda kunze kweforoma pamwe chete uye patsanura kubva muchikamu chepurasitiki.
(5) otomatiki tambo kuburitsa jekiseni kuumbwa
Kune epurasitiki zvikamu zvine tambo, kana otomatiki kudonhedza pasi kuchidikanwa, inogona kutenderedzwa yakamisikidzwa musimboti kana mhete inogona kumisikidzwa paforoma, uchishandisa chakuvhuvhu kuvhura chiito kana kutenderera mashandiro ejekiseni kuumbwa muchina, kana yakakosha yekufambisa kifaa kutyaira shinda yakakosha kana yakakoshwa mhete inotenderera kuti isunungure chikamu chepurasitiki.
(6) inomhanya isina jekiseni kuumbwa
Iyo inomhanya isina jekiseni muforoma inoreva nzira yekudhiabatic kudziyisa yemumhanyi yekuchengetedza iyo epurasitiki pakati penzou uye mhango yeiyo jekiseni Kuumbwa muchina mune yakanyungudutswa mamiriro, kuitira kuti pasave nekondensati mune inodurura system kana chikamu chepurasitiki chatorwa kunze kana chakuvhe chakuvhurwa. Iyo yekutanga inonzi adiabatic mumhanyi jekiseni muforoma, uye iyo yekupedzisira inonzi inopisa mumhanyi jekiseni muforoma.
(7) Right-angled jekiseni muforoma
Right-angled jekiseni anoumba anongokodzera chete engoro jekiseni kuumbwa michina. Kusiyana nedzimwe jekiseni kuumbwa, iko kudyisa kwekutungamira kwerudzi urwu rweforoma panguva yekuumba kunoenderana pakuvhura nekuvhara nzira. Yake huru yekuyerera nzira inoiswa pamativi ese enzvimbo inofamba uye yakagadziriswa muforoma yekuparadzanisa nzvimbo, uye nzvimbo yaro yepakati-chikamu inowanzo gara. Izvi zvakasiyana nemamwe majekiseni anoumba. Kuguma kweiyo huru kuyerera nzira ndeyekudzivirira jekiseni kuumbwa muchina. Iyo kamwene uye yekupinda yekupinda kweiyo huru chiteshi yakasakara uye yakaremara, uye chinotsiviwa chichiyerera chiteshi chekupinza chinogona kupihwa.
(8) Jekiseni chakuvhuvhu chakuvhuvhu kusunungura mashandiro pane yakatarwa muforoma (Mhango)
Mune akawanda jekiseni anoumba, iyo ejection chishandiso yakaiswa padivi pechinhu chinofambiswa chakuvhuvhu, chinoenderana nebasa reiyo ejection mudziyo mukuvhura nekuvhara muforoma sisitimu yejekiseni yekuumba muchina. Mukugadzirwa chaiko, nekuti zvimwe zvikamu zvepurasitiki zvakaganhurirwa nechimiro, zvirinani kusiya chikamu chepurasitiki padivi peiyo yakagadziriswa mold. Izvi zvinoita kuti chikamu chepurasitiki chibude muforoma, saka chinofanirwa kuiswa padivi peiyo yakagadziriswa mold. mashandiro.
Post nguva: Sep-19-2020
Zvadaro: Chii chinonzi Mold Base?
Pashure: Plastic jekiseni richigadzirisa Shrinkage